Amin'ny ririnina dia tena zava-dehibe ny mitazona ny hafananao amin'ny toerana rehetra. Indraindray dia mitranga amin'ny rivotra na rivotra mandalo amin'ny toerana iray, ary tapaka tanteraka ny fampiononana. Ankehitriny, ireo mpanakanto lamaody dia manolotra ny sarin'ny ririnina fialamboly miaraka amin'ny fitaovana malaza toy ny jark. Ity singa ao am-pandriana ity dia tena mahomby sy mora noho ny habeny, izay tena mahasoa amin'ny vanim-potoana maivana, ary koa ny tsy fitoviana. Ny zioga dia azo ampiasaina ho lamaody lamaody, fa amin'ny rivotra mipoitra dia afaka manamboatra ny cap. Ary koa, ny satroka lamaody amin'ny lamaody dia manerana izao tontolo izao amin'ny fomba. Ny mono mitafy amin'ny fotoana mafana miaraka amin'ny akanjo mafana na jiro mahazatra. Amin'ny ririnina, ny tendron-kiraro dia mijery tsara miaraka amin'ny akanjo marevaka, ary miaraka amin'ny akanjo mafana. Ankoatra izany, ankehitriny ny fashionista rehetra dia afaka misafidy singa mahafatifaty, manadino ny safidiny manokana, ary koa ny fametahana ny tanany amin'ny fomba manokana.
Karazana Screws Scarf
Iray amin'ireo karazan'akanjo malaza indrindra amin'izao androntsika izao ny modely amidy. Indrindra raha ny vokatra dia vita vita tanana, satria ny soritra androany dia eo amin'ny tampon'ny lamaody. Ny ankamaroan'ny vehivavy lamaody dia mankamin'ny scarves-zioga amin'ny saka, arans, ary koa ny lamaody irlandey. Tsy sarotra ny mamatotra zioga . Ny jiogam-paingotra dia azo avy amin'ny tsiranoka mohair na angora tsara tarehy, ary volon'ondry matevina na antsasaky ny volom-borona. Ary ho an'ireo izay mitady vahaolana voaomana, ireo stylists dia nanolotra karazam-bolo maro isan-karazany amin'ity sehatra ity.
Ankoatra ny akanjo maingoka dia tena malaza ny modely amin'ny jiro vita amin'ny felaka. Ho an'ny androany dia azo atao ny mifidy kavina malefaka amin'ny hoditra voajanahary na artifisialy. Saingy ny stylist dia tsy manoro-dàlana, toy ny akanjo hoditra - zioga amin'ny sary miaraka amin'ny akanjo volom-paty.
Office Dresses 2014
Loko mody amin'ny 2014
Manikika amin'ny fantsika fohy 2017 - lamaody lamaody, hevitra mahaliana, vahaolana maoderina
Jiro amin'ny nify
Booty rubber 2013
Red manicure 2017 - sary ny hevitra tsara indrindra
Calamine lotion misy poizina
Salad "Blizzard" - ho an'ireo izay tsy matahotra andro ratsy
Sakafo ho an'ny lakolosy
Ahoana ny fomba fitafy tsara?
Papaya maina - fananana ilaina
Duke Hugh Grosvenor nandao ny lisitr'ireo mpandevina any Grande-Bretagne "maimaim-poana sy manankarena"!
Wasabi - tsara sy ratsy
Coat Zara - sary vitsivitsy amin'ny modely lamaody indrindra amin'ny akanjo Zara
Ny saka mihantona mafy - inona no tokony ataoko?
Ponostalgiruem: ireo mpilalao sarimihetsika "Angel Wild" avy eo ary ankehitriny
Toerana mena amin'ny vatany
Fofona ao anaty oven miaraka amin'ny voatabiha sy tsaramaso
Ahoana no hanatsarana ny fihinana henan'omby ao anaty lasitra?
Nahoana aho no tsy afaka manasa lovia amin'ny fety?
Karazan-damba ho an'ny fantsona